ကော်ဖီကိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ကော်ဖီဖျော်စက်လုပ်နည်း - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
ကော်ဖီဖျော်စက်လုပ်နည်း - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
တိုင်းတာပါကော်ဖီ။ စံအချိုး၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2ဇွန်းဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီရေ6အောင်စနှုန်း။
သင်၏ကြိတ်ဆုံကိုကြိတ်ပါကော်ဖီ။ ကောင်းပြီ, ဒီအဘယ်မှာရှိကော်ဖီ-ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတကယ်စတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်နာမည် Mike Jones ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်က New Rail City ရှိ Washington SquarePark ရှိတတိယရထားကော်ဖီဆိုင်မှာ barista တစ်ယောက်ပါ။ ငါမင်းကို French Press မှာအခြေခံကော်ဖီဖျော်ရည်နည်းနည်းသင်ပေးမယ်။ ပထမ ဦး စွာသင်အနည်းငယ်သောအရာများလိုအပ်သည်။
သင်ဟာလတ်ဆတ်တဲ့ကော်ဖီလိုအပ်တယ်၊ bean တစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ Timer တစ်ခုလိုအပ်တယ်၊ ပြီးတော့ French Press ကိုလည်းလိုအပ်တယ်။ ပထမဆုံးလုပ်မှာကပဲချိန်တာပဲ။
ငါဒီအရွယ်အစားပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းအတွက်ကော်ဖီ ၂၅ ဂရမ်သုံးချင်တယ်။ သင့်တွင်အကြေးများမရှိပါကတိုင်းတာခြင်းဇွန်း ၃ ခုသာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဤကော်ဖီကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ဒါကမြေအောက်အလတ်စားပဲ။ သင်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ကြိတ်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ကစားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလွန်ခါးသော၊ အရသာရှိသောအရသာရှိပါကသင်သည်အနည်းငယ်သေးငယ်သောမြေကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ရေနည်းပြီးအားနည်းနေလျှင်၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းလွန်းနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က French Press ကိုယူပြီးသင်အပူပေးချင်တယ်။ သင်သည်ရေကိုဆူအောင်တည်ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ဤနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောရေတာဝါရှိသည်။
ထို့နောက်သင်ကခဏထိုင်ပြီး၎င်းသည်ပူလာသည်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းကိုအပူပေးပြီးနောက်သင်ကခြောက်သွေ့စေချင်တယ်။ ပြီးတော့ကော်ဖီစေ့ထည့်လိုက်တယ်။ အခုငါကော်ဖီစိုက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်, အတိုင်းအတာကိုင်ထားဖို့သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မင်းမှာတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီအရွယ်အစားအတွက် ၁၂ အောင်စလောက်အောင်စလောက်ရေကိုသုံးချင်တယ်။ ငါရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်း၌ရေသွင်းထားလိမ့်မယ်။ ငါထည့်ပေါင်းမယ့်ပထမဆုံးငွေပမာဏကစာနယ်ဇင်းရဲ့အောက်ခြေမှာမြေဆီလွှာကိုစုပ်ယူရုံနှင့်လုံလောက်သည်။
ပြီးတော့မြေနဲ့မြေဆီလွှာအားလုံးကိုရောနှောပြီးအချိန်ကုန်သက်သာအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကဒါကိုစက္ကန့် ၃၀ လောက်ပဲထိုင်ခွင့်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အပူကိုနဂိုအတိုင်းဆက်ထိန်းထားရန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေလျှင်စက္ကန့် ၃၀ ကြာပြီးနောက်သင်ကျန်ရှိနေသေးသောရေကိုထပ်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
အခုဒီဟာတွေဟာ ၁၂ အောင်စတစ်အောင်ခွဲ (သို့) ၄၀၀ ဂရမ်ရေ ၄ eitherကရောဒါကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာလှန်လှောပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကရေကူးကန်ကိုဝတ်ပြီး ၃ မိနစ်လောက်ထိုင်ခိုင်းပါ။ ဒါကြောင့် ၃ ½မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သင်က planer ကိုဖိလိမ့်မည်။
သင်ကမြေကြမ်းလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းရှိမရှိသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သငျသညျခုခံခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ပြုနိုင်လျှင်, ဒါကြောင့်လည်းကြမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်တွန်းလှန်ရန်အောက်ပါအခက်အခဲများရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
ထိုအခါငါမထမ်းဆောင်မီပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းဖျက်သိမ်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်, သင်ကအဲဒီမှာထားခဲ့ပါကတကယ်တော့ဆက်လက်နှင့်ခါးသောအရသာရှိလိမ့်မယ်။ သင်လုပ်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုအအေးခံ။ အစေခံရန်အဆင်သင့်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။
စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်များအတွက်စံအချိုးအစားကော်ဖီမြေ၏ 1-2 ဇွန်းဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီရေ ၆ အောင်စနှုန်းတွင် - ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကော်ဖီနှင့်2ပိုမိုအားကောင်းဘို့ကော်ဖီ။ ၆ အောင်စအတိုင်းအတာသည်စံတစ်ခုရှိ“ ခွက်” နှင့်ညီမျှသည်ကော်ဖီဖျော်စက်, ဒါပေမယ့်စံခွက်အရွယ်အစား 12 အောင်စသို့မဟုတ်ပိုကြီးတဲ့နီးကပ်လာကြောင်းသတိရပါ။မတ် ၆ 2019
ဒီကော်ဖီဟာသင်ကော်ဖီမှာအကောင်းဆုံးကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်အရသာရှိတာအမှန်ပါပဲ ။- ဒီနေ့ကော်ဖီစိုက်ခင်းအခြေအနေအကြောင်းပြောမယ်။ filter နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကော်ဖီတစ်ခွက်စိုက်ရန်ကော်ဖီမည်မျှသုံးသင့်သနည်း။ ကော်ဖီ? အခုဒီအကြောင်းသုံးဆင့်ကိုပြောမယ်။
တစ်လီတာဂရမ်ကိုသုံးတဲ့အခါအချိုးအစားတစ်မျိုးမျိုးကိုငါဘာကြောင့်အကြံပြုသလဲဆိုတာကိုပြောမယ်၊ ပြီးရင်အကောင်းဆုံးအချိုးကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာပြောမယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘီယာချက်ချက်နည်းစနစ်အတွက်မတူညီတဲ့အချိုးအစားကိုအကြံပေးရသလဲဆိုတာကိုပြောမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ တစ်လီတာအတွက်ဂရမ်ကိုဘာလို့အကြံပြုသင့်တာလဲ။ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အချိုးအစားများပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးမှာခွက်တစ်ခွက်လျှင်အကြံပြုတိုင်းတာခြင်းဇွန်းဖြစ်သည်။ ကျုံးများအတွက်နိုင်ငံတကာစံမရှိပါ။
တစ် ဦး ကကျုံးခုနစ်လုံးကိုဂရမ်ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၁၀ ဂရမ်ကနေ ၁၂ ဂရမ်လောက်ရှိမယ်။ အခုငါကျုံး၊ ခွက်၊ ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ထုထည်တိုင်းတာမှုတွေနဲ့ပြtheနာရှိနေပြီ။
ဆိုလိုတာကသူတို့မှာfရှိတယ်။ အမှန်တကယ်အလေးချိန်ကွာခြားမှုသည်မတူညီသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မှောင်မိုက်သော၊ အလတ်စားမြေဆီလွှာကော်ဖီကိုသုံးလိုလျှင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအဆင့်ဇွန်းတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလေးချိန် ၇ ဒသမ ၇ ဂရမ်ခန့်ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလင်းရောင်ဖြင့်လှော်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောမြေသို့သွားခဲ့သည်။ ရှစ်ရှစ်စင်တီမီတာအလေးချိန်ရှိတဲ့ကော်ဖီ၊ ၁၀% ထက်ပိုသောကော်ဖီ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာတူညီတဲ့အသံပမာဏကိုထပ်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်ဂရုစိုက်ပါတယ်။
သင်အသုံးပြုနေသောဂရမ်အလေးချိန်ပမာဏအတော်အတန်ကွာခြားမှုများ၌ဤအသံအတိုးအကျယ်အနည်းငယ်သာရှိရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏နေ့စဉ်နံနက်ကော်ဖီသောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ Scoops များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အချို့ကော်ဖီများသည်ကောင်းမွန်သောနေ့ဖြစ်မည်၊ သငျသညျတူညီသောအမှုကိုပြုပုံ, ဒါပေမယ့် volumetric တိုင်းတာလုပ်ရင်တောင်သူတို့ကအရမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသောမရှိကြပေ။
နောက်တစ်ဆယ့် ၁၄ အမြှောက်၊ ၁၅ ကနေ ၁၅၊ ၁၆ ကနေအချိုးအစားတွေရှိတယ်။ ဒါကငါ့ခေါင်းကိုပျက်စေတယ်၊ ​​ငါသူတို့ကိုငါမပိုင်ဘူး။ ဒီအချိုးအစားတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။
သငျသညျစက်ပြင် tipling ဖို့ထင်နေကြသည်
မင်းကော်ဖီဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာမင်းသိရင်မင်းကော်ဖီဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိချင်တယ်။ ဒါကကျွန်မမနက်မှာပြaနာမရှိဘူး။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောကော်ဖီပမာဏများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောကော်ဖီမည်မျှရှာဖွေရမည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ မည်သည့်ကော်ဖီအလေးချိန်သည်စသင့်သည်ကိုသင်သိသည်။
ဒါကြောင့် ၁ နဲ့ ၁၅ အချိုးနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်လိုတယ်ဆိုရင် ၅၀၀ နဲ့ ၁၅ ကိုအရင်မခွဲဘူး။ ဒါပေမဲ့မင်းကတစ်လီတာတစ်ဂရမ်ကိုပေးရင်ကောင်းမယ်၊ ကိုယ့်လိုအပ်တာထက်တစ်ဝက်လီတာစိုက်မယ်
အကယ်၍ တစ်လီတာလျှင် ၆၀ ဂရမ်ရှိလျှင်၊ ငါတစ်ဝက်လိုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ဂဏန်းတွက်စက်မလိုပါ ငါသာသင်္ချာအနည်းငယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ခွက်တစ်ခွက်မှာဘီယာ ၈ အောင်စဒါမှမဟုတ် ၈ အောင်စလောက်ရှိတယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ငါတစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ၄ ခုထက်ပိုပြီး၊ ၂ ခုလုပ်ရင်အရေးမကြီးပါဘူး။ မင်းသိတယ်ငါ ၁ လီတာဝက်၊ လီတာတစ်လုံး၊ သုံးလီတာသုံးပုံတစ်ပုံသုံးတယ်။
သင်္ချာဆိုတာဘယ်တော့မှမရှုပ်ပါဘူး။ ငရဲမှာအထူးနေရာတစ်ခုရထိုက်သောဆက်နွယ်မှုနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောနှောယူနစ်အချိုး, သင်တစ်အောင်နှုန်းဂရမ်အကြံပြုလျှင်, ထွက်, ဝေး, သင်ပိုင်ဘူး။
အဲဒါကိုအားလုံးရယူပါ။ သင်ဘာလုပ်ပါသလဲ? “ ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးပဲ။ မဟုတ်ပါ၊ ငါtheကရာဇ်ကိုဆိုလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုအစပြုရန်အချိန်မရှိသေးသော်လည်းialကရာဇ်နှင့်မက်ထရစ်ကိုရောထွေးမထားပါ။
ဘေးဖယ်ဆူပါ ငါတို့ကလီတာတစ်ဂရမ်ကိုဂရမ်ကျတယ်။ အဲဒါဟာတကယ်ကောင်းတဲ့သန့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်လီတာကို ၆၀ ဂရမ်ကအများစုကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကအရမ်းလွယ်တယ်။ အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ ဤအရာသည်ဤဆောင်းပါး၏ဒုတိယအပိုင်းသို့ ဦး တည်စေသည်။
ရေတစ်လီတာလျှင်ကော်ဖီမည်မျှသောက်သင့်သနည်း။ ဒါကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့တကယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။ မှန်ကန်သောအချိုးအစားမရှိပါ။ ဦး စားပေးမှုသာရှိသည်။
သင်အသုံးပြုသောကော်ဖီနှင့်ရေအချိုးသည်နောက်ဆုံး၌ကော်ဖီခွက်မည်မျှခိုင်မာမည်၊ သင်ကော်ဖီကိုမည်မျှကြိုက်သည်ကိုအမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒါကခင်ဗျားရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ငါတစ်လီတာလျှင် 60 ဂရမ်တော်တော်ကောင်းသောယူနစ်အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
လူအများစုသည်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခု၏ရလဒ်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြသော်လည်းသင် ၅၅၊ ၅၀၊ ၇၅ ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုတွင်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အချက်တစ်ခုမှာထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ငါထုတ်ယူ Give မှအမြန်နိဒါန်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
မြေအောက်ကော်ဖီတွင်၎င်း၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်ပျော်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေဖြင့်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သူတို့ထဲကသုံးပုံနှစ်ပုံဟာတော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
၎င်းသည်သစ်သားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မင်းကဒီကော်ဖီစိုက်ခင်းကိုခွင့်ပြုတယ်၊ မင်းမှာကော်ဖီစိုက်ခင်းတွေကျန်နေသေးပြီးမင်းကနောက်မှလွှင့်ပစ်မယ်။
သင်ကော်ဖီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောအရာခပ်သိမ်းကိုမလိုလားပါ။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင်၊ ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့သင်္ချာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရချင်တယ်။ တချို့က ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၃ ပိုနည်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀% လောက်ပြောချင်တယ်။
သင်သည်သင်၏ကော်ဖီကိုကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ပါကရရှိလာသောရေခဲမုန့်သည်ကစီဓာတ်ဖြစ်လာမည်။ သို့သော်သင်ကော်ဖီကောင်းစွာမထုတ်လုပ်နိုင်ပါကထို ၆၀ ဂရမ်လီတာသည်အားနည်းသောခွက်ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ သင်က၎င်းကိုအနည်းငယ်သာထုတ်ယူသည်ဆိုပါစို့၊ သင်သည်၎င်းကိုကြမ်းတမ်းစွာပြုလုပ်သည်ဆိုပါစို့၊ သင်လည်းအားနည်းတဲ့ခွက်တစ်လုံးနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အချိုးအစားကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအချိုးအစားကိုတွက်ချက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ အရသာနဲ့တကယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှသာကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်ပြီးအရသာရှိတယ်လို့ထင်ရင်အချိုးကိုသာပြောင်းလဲချင်တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်နည်းနည်းပိုမိုအားကောင်းခဲ့အလိုရှိ၏။ ဤအချိန်သည်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပြီးသူကအနည်းငယ်အားနည်းသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည်အက်ဆစ်နည်းနည်း၊ အရသာမရှိ၊ သင်၏အချိုးအစားကိုမပြောင်းလဲပါ၊ ထုတ်ယူခြင်းကိုမပြောင်းလဲပါ၊ အနည်းငယ်ပိုကြိတ်စက်၊ ။
သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်မရှုပ်ထွေးမီဤအရာများကို ဦး စွာပြုပြင်ရန်လိုသည်။ သငျသညျအရသာနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေလျှင်, တစ် ဦး စမ်းပါ။ ငါ့ဘဝမှာငါကော်ဖီခွက်၏နောက်ဆုံးခွန်အားအရငါနှစ်သက်သောအရာကိုနည်းနည်းလှည့်လည်ခဲ့သည်။
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာပါပဲ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါ။
ဤသည်မှာဤဆောင်းပါး၏တတိယအပိုင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့်မတူညီသောစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ရန်နည်းလမ်းများအတွက်အချိုးအစားအမျိုးမျိုးသုံးရန်အကြံပြုပါသည်။ ယခုသင်သည်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကော်ဖီစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနည်းလမ်းအားလုံးကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ Perolation နှင့် Infusion ။ တုန်ခါမှုနှင့်အတူယခုကော်ဖီအိပ်ယာမှတဆင့်ရေစီးဆင်းနေသည်။
ပြုတ်ရည်ထဲမှာ, ရေအားလုံးနှင့်ကော်ဖီအားလုံးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကာလအတွင်းချိတ်ဆက်နေကြသည်။ သွန်းလောင်းခြင်းသည်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းဖြစ်သော AeroPress ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပြုတ်ရည်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။
ယခုငါ Perolation နည်းလမ်းအတွက်ပြုတ်ရည်ထက်ကော်ဖီအနည်းငယ်ပိုပြီးပြုတ်ရည်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ငါဘာကြောင့်ရှင်းပြရမလဲ အငြင်းအခုံကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစို့၊ ငါတို့ကော်ဖီတစ်လီတာစိုက်မည်၊ တစ်လီတာလျှင် ၆၀ ဂရမ်သာသုံးမည်။
ဒါကစဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ။ ဒီသီအိုရီအရကော်ဖီ ၂၀% ကိုထုတ်ယူတော့မှာလား။ ဆိုလိုသည်မှာထိုဂရမ် ၆၀ တွင် ၁၂ ဂရမ်ခန့်သည်အရည်ပျော်ပြီးကော်ဖီအရည်သို့ယူဆောင်လာသည်။ အကယ်၍ သင်ကပြုတ်ရည်ကိုလုပ်သည့်အခါသင်ထိုးဖောက်မှုများပြုလုပ်နေပါကသင်လောင်းသောရေအားလုံးသည်ဟင်းရည်ထဲသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကော်ဖီတစ်ဂရမ်လျှင်ဂရမ် ၂ ဂရမ်ခန့်မြေပေါ်ကော်ဖီသို့စုပ်ယူသည်။
ဒီအိပ်ယာမှာရေအများကြီးရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဘီယာချက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်တော့မှမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ရလဒ်မှာရေ ၈၈၀ ဂရမ်ခန့်တွင်ပျော်ဝင်နေသောကော်ဖီ ၁၂ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းကိုယူပြီးအဲဒီအတိုင်းလုပ်ရင်မင်းကလီတာတစ်ဂရမ်ကို ၆၀ ဂရမ်၊ ငါတို့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ပျော် ၀ င်နိုင်တဲ့ ၁၂ ဂရမ်၊ အခုရေ ၁၀၀၀ ဂရမ်ထဲမှာပျော်ဝင်သွားတဲ့ ၂၀% ထုတ်ယူမှုကမင်းကိုထုတ်ယူတယ်။
ထောင်ဂဏန်းတိုင်းငါတို့ဘီယာချက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါ ၀ င်ပြီးဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကိုဖြန့်ဖြူးပေးတယ်၊ ဒါကပြုတ်ရည်ကိုတူညီတဲ့ထုတ်ယူမှုဖြစ်ပေမဲ့ပြုတ်ကျစေတယ်။ သငျသညျအလားတူထုတ်ယူနှင့်အစွမ်းသတ္တိချင်တယ်ဆိုရင်, ငါငါ့အ infusion အတွက်ကော်ဖီပိုမိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ၇၀ ဂရမ်၊ ရေတစ်လီတာလျှင် ၇၅ ဂရမ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်ယူခြင်းသီအိုရီထဲကို ဝင်၍ သင်၏ refractometer ကိုစတင်ဖွင့်ပါကသင်၏ထုတ်ယူမှုတွက်ချက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အနေဖြင့်၎င်းသည်နှစ်မြှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် Perolation ဟုတ်မဟုတ်ဖော်ပြရန် software မှသင့်အားညွှန်ပြနေသည်။
သို့သော်၎င်းထက်ကျော်လွန်ပါက AeroPress ၏ဖြစ်ရပ်တွင်တောင်မှအောက်ခြေတစ်ခုလုံးသည်ဘီယာထုတ်လုပ်သောရေအားလုံးနှင့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိထိတွေ့နေသည့်ပြုတ်ရည်တိုင်းနှင့်အတူပြုတ်ရည်တိုင်းနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်၏ခွန်အားနှင့်အရသာကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ မင်းကဒီအရည်ကိုသောက်ပြီးကော်ဖီအိပ်ကိုဖိလိုက်ပြီလား။ ဒါဟာနေဆဲတစ်ခုပြုတ်ရည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည်တစ်ခုစီအတွက်တစ်လီတာလျှင် ၆၀ ဂရမ်ခန့်သာကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ပြုတ်ရည်တစ်ခုစီအတွက်တစ်လီတာလျှင် ၇၅ ဂရမ်ခန့်သာကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
အစိမ်းရောင်ဂျာစီခရီးစဉ်က de ပြင်သစ် 2019
ဒီနှစ်ခုလုံးကအစကောင်းတယ်ထင်ပေမယ့်အဖြေတော့မဟုတ်ဘူး။ it ၀ ံဂေလိတရားအဖြစ်မယူမှတ်ပါနှင့်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုရှာပါ။
သင်၏အကြိုက်ကိုရှာပါ။ သူတို့ဟာအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းပြောင်းပါ။ ရေပမာဏဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်သည်။
သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာမလိုပါ၊ သင်ရေလောင်းသောရေပမာဏသို့မဟုတ်သင်ကော်ဖီမသောက်မီသင်ပြုလုပ်သောကော်ဖီပမာဏကိုမသိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်တစ်ခုယူပါ။ ဤသည်စတင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မင်းအိမ်မှာဘာတွေစိုက်နေတယ်ဆိုတာငါကြားချင်တယ်။ မင်းခရီးစဉ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာချင်ပါတယ် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင်တို့အဘို့ပြောင်းလဲသွားပြီလား မင်းကအားနည်းလား ဖြစ်လာသည်? သင်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီလားနေရာတစ်နေရာလုံးမှာသင်ကတုန်ခါနေသလား။ မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာငါတကယ်ကြားချင်တယ်
စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ Damn it။
ရန်ကော်ဖီတစ်ခွက်ပါ,မင်းလက်ငင်းလိုအပ်သည်ကော်ဖီအမှုန့်, ​​ပူနို့နှင့်သကြား။ 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထည့်ပါကော်ဖီနှင့်တစ် ဦး သကြား 1 ဇွန်းခွက်အသီးသီး။ အဖြစ်ကောင်းစွာနို့ 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထည့်ပါ။ အဖြစ်များတဲ့ဇွန်းနှင့်အတူအရောအနှော whiskသင်လုပ်နိုင်သည်အရောအနှောအရောင်နှင့် creamy အတွက်အလင်းအညိုရောင်ဖြစ်လာသည်အထိ။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ 2020
အတွက်ကော်ဖီရှည်လျား။ ထူထပ်သောဖန်ခွက်နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်သောစမ်းချောင်းထဲသို့လောင်းထည့်ပါနို့အတွက်။ ဒီအအေးပါလိမ့်မယ်ကော်ဖီ/နို့အရောအနှောပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်ဖန်ခွက်၏ထိပ်တွင်အမြှုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ပြီးနောက်သကြားဓာတ်ကိုသကြားထည့်ပြီးပျော်မွေ့ပါစေနို့နှင့်ကော်ဖီ!အောက်တိုဘာ ၁၉ 2018
ဘုရားသခင်ကြည့်ရတာအရမ်းလှတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်ဖြစ်သည်။ ဒါကကောင်းတဲ့ထောပတ်သီးလိုပါပဲ
ဘယ်လောက်ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ၊ မင်္ဂလာပါတို့၊ ငါမင်းသမီး Emma Chamberlain ဖြစ်ပြီးငါကြိုက်နှစ်သက်သောကော်ဖီစာရွက်နှင့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနံနက်စာချက်ပြုတ်နည်းများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြတော့မည်။ ဒါမှမဟုတ်? (Pan hisses) အရမ်းလှတယ် (ခေါင်းလောင်းအနည်းငယ်) (မထားဘဲတေးဂီတ) Mm ။ (သာလွန်ကောင်းမွန်သောဂီတ) ကျွန်ုပ်၏အသံသည်ယခုပင်အလွန်ထူးဆန်းနေဟန်ရှိသောကြောင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသံပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ငါအရမ်းလွန်းအော်ဟစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ (ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိုက်နှိုက်လိုက်တာ) ဒါကြောင့်ကျွန်မကော်ဖီကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ရွတ်လိုက်တယ်။ ငါလည်းမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုစကြရအောင်။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရတာက latte ပါ။ ပထမတော့ Mason အိုးလိုတယ်။ အိုကေ၊ ဒါကဘာကြောင့်ညစ်ပတ်နေတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ နည်းနည်းညစ်ပတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဆင်ပြေတယ်၊ ဒါကကျွန်တော့် Chamberlain ကော်ဖီ Mason အိုးပါ။
ထို့နောက်ငါအခြားအရာအနည်းငယ်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဗာဒံနို့၊ vanilla almond နို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကော်ဖီထဲတွင်ထည့်ထားသောကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသက်သတ်လွတ်ဖြူကော်ဖီဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ငါ Chamberlain ကော်ဖီအရောအနှောကိုသာအသုံးပြုသည်။ ကြောင် Blend။ ဒါကနည်းနည်းအလတ်စားကင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Chamberlain ကော်ဖီနှင့်အတူငါ့အရောနှောအားလုံးမှတဆင့်ဖြန့်ဝေ။
ငါ့မှာအကြိုက်ဆုံးမရှိဘူး၊ အဲဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမယ့်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ရေခဲမုန့်လိုတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခု။ အိုကေ၊ အခုမေးခွန်းအချို့လာပြီ။
အိုကေပထမမေးခွန်း။ ငါအစဉ်အဆက်လုပ်သောငါ့အကြိုက်ဆုံးဆောင်းပါးကဘာလဲ? ဒါကငါတကယ်မကြာခဏမစဉ်းစားတဲ့တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ငါကြိုက်တဲ့ငါ့အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အမှတ်တရများကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ် Coachella vlogs ဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သူမ၏နောက်ကျောကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ပျော်စရာ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကငါ့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ (Grinder hums) ကျွန်ုပ်ကော်ဖီကြိတ်နေချိန်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု။
သင်မဟုတ်သောအထွေထွေစတိုင်ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်လား။ (Mill hums) ငါကစတိုင်လ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာချင်ဘူး။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖျက်, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုးကား။ ငါ့မှာဒီလိုမျိုးဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုနင့်ကိုနေစေသရွေ့အဝတ်အစားတိုင်းသည်ဟုတ်တယ်လို့ငါတကယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကစတိုင်လ်ကသင့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုမခံစားရစေတဲ့အရာတစ်ခုခုမတပ်ဆင်ထားဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ သင်ဂုဏ်ယူ ၀ တ်စားဆင်ယင်သည့်အခါသင်ယုံကြည်မှုရှိပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Blah Blah Blah ။
ဒါပေမယ့်သင်ဟာသင့်ရဲ့အဝတ်အစားမှာမနေလျှင်သင်အရမ်းစိတ်မခံစားရဘူး။ ဒီတော့ဒါကငါ့ရဲ့စတိုင်ပဲမဟုတ်လား။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာအဝတ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ မပျော်သောအချိန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် 'ငါမဝတ်တော့ဘူး။ (Machine buzz) ဘုရားသခင်ကြည့်ရတာအရမ်းလှတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကငါဟာထူးဆန်းစွာလုပ်လို့မရဘူးလို့ခံစားရတဲ့အရာတစ်ခုခုကဘာလဲ။ ငါအဝတ်နှင့်အတူတစ်ကယ့်ကိုခက်ခဲအချိန်ရှိခြင်း; အဝတ်အစားတွေမဝတ်ရလို့ငါခံစားရတယ် ငါအဝတ်နဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်ထင်တယ် ဒါကြောင့်အ ၀ တ်အစား ၉၉.၉% ကအများစုကသူတို့ကိုငါမချွတ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
ပြီးတော့ ၀ တ်စုံသပ်ရပ်လှပတဲ့ရံဖန်ရံခါဝတ်စားဆင်ယင်မှုရှိပေမယ့်တော်တော်ရှားပါတယ်။ အဝတ်အစားအများစုကိုချွတ်လို့မရဘူး (chuckles) ၀ တ်စုံကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်၊
ကော်ဖီအပြင်ကျွန်မရဲ့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးသောက်စရာကတော့ (ထိတ်လန့်နေတယ်) ရေထုံးနှင့်အတူတောက်ပနေသောရေဖြစ်သော်လည်းကော်ဖီသည်ကျွန်ုပ်နံပါတ်တစ်ဖြစ်သည်။ ငါရေခဲရေကိုလည်းကြိုက်တယ်၊ ရေခဲဟောင်းအဟောင်းကသာသံပုရာသီးလေးနဲ့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်စာရွက်ကို။
ငါဒီမှာ espresso နှစ်ခုရိုက်ချက်များရှိသည်။ ထိုအခါငါအဲဒီမှာအကြောင်းကိုအချို့သောဗာဒံနို့ထည့်ပါ။ ထိုအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆင်ပြေပါတယ် ထိုအခါငါ Nut Pod Creamer, (အရည်, sloshing) vanilla ကိုသုံးပါ, ထိုသို့ထိပ်ဆုံးရန်။ ပြီးတော့အဲဒါပြီးပြီ၊ အရမ်းကောင်းတယ်။
အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။ နံနက်စာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်နိုင်တာကံဆိုးတာပဲ avocado toast လုပ်တော့မယ်။
အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီမှာသင်လိုအပ်တာ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်း၊ ပြီးတော့စကြရအောင်။ လုပ်ရတာအရမ်းလွယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့ avocado toasta နည်းနည်းကွဲပြားအောင်လုပ်ပေးသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါကြောင့်ကြည့်ရတာပျော်ရတာပေါ့။ ငါဟာငါ့ရိုးရိုးလေးလို့ထင်တယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးသင် avocados လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုအခါသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုမုန့်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါအေးခဲနေပါတယ် ငါဒီမုန့်ရတယ်။
ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တောင်မသိဘူး။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ ၎င်းကိုချဉ်ပေါင်မုန့်ဟုခေါ်သည်။
ပြီးတော့ငါဖြတ်ပြီးအေးခဲအောင်လုပ်လို့မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့်ထူးဆန်းပုံရသည်။ (ရယ်သံများ) ငါတို့မှာသံပုရာဖျော်ရည်၊ ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်တွေရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်သည်ခိုင်မာသောကျောက်ဖြစ်သော်လည်းမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အခုတော့အားလုံး - ဒါပေမယ့်-the- သေတ္တာ, နံ့သာမျိုးနှင့်ငရုတ်သီးအလွှာနှင့်ပူငံပြာရည်။ cholula ကြိုက်ပါတယ်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှသည်အဆင်ပြေပါသည်။ တခါတလေငါကြက်ဥထည့်လိုက်ပေမယ့်ဒီနေ့တော့ငါသိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဒါကြောင့်ရိုးရိုး avocado toast လုပ်ရအောင်။ အဆင့်တစ်, သင်၏ပေါင်မုန့်ကင်။
ငါတို့မုန့်ကိုပေါင်မုန့်ပေါင်မုန့်ကင်လုပ်နေတုန်းမေးခွန်းတွေဖြေတယ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ကော်ဖီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမှာအားလုံးရိုးသားသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငါကော်ဖီကြိုးစားနေကိုချစ်။
၏သင်တန်းကပျော်စရာပါပဲ။ ငါကော်ဖီအမြဲတမ်းလက်ထဲမှာရှိနေတာအရမ်းကောင်းတယ်။ ကော်ဖီလုပ်ငန်းခွင်၌ကော်ဖီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာလူကောင်းတွေအများကြီးရှိပြီးကျွန်တော့်အသင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော့်ကိုသိသင့်သိသမျှအရာအားလုံးကိုသာသင်ပေးတယ်။ ထိုအခါငါပဲကျေးဇူးတင်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကော်ဖီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူငါ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ (အကောင်းမြင်ဂီတ) Chamberlain ကော်ဖီသည်အခြားကော်ဖီကုမ္ပဏီများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားစေသည့်အရာသည်အပျော်ကစားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကော်ဖီကုမ္ပဏီအများစုကဒါကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ Chamberlain ကော်ဖီကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားချင်ဘူး။ ပျော်စရာရယ်၊ ပြီးတော့ဒါကထူးခြားစေတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
စကားမစပ်, ထောပတ်သီးဖြတ်သည်။ ဒီတော့ဒါကိုအိုးတစ်လုံးထဲထည့်လိုက်ကြစို့။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ထောပတ်သီးတစ်ခုပါပဲ။
အိုး၊ ဒါကကောင်းတဲ့ထောပတ်သီးတစ်ခုပါ။ မည်မျှပြီးပြည့်စုံသည်ကိုကြည့်ပါ။ (ရွှင်လန်းမှုဂီတ) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စူပါပါဝါရှိလျှင်လူများကိုကုသနိုင်သည်။
'Zing' လို့ပြောနိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်ရာကနေငါပျောက်အောင်ကုသပေးမယ်။ လူတွေကိုငါ့လက်ချောင်းနဲ့ကုသပေးနိုင်တာပဲ။ ဒါကဘဝကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက avocado toastis အတွက် avocado ကို fork တစ်ခုနဲ့သုတ်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူအရူးရ။ အဲဒါနဲ့အတူပျော်ပါ။
တစ်စက္ကန့်လောက်ကြာလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အကယ်၍ ငါ LA ၌မနေပါကဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နေထိုင်ကောင်းဖြစ်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် LA တွင်မနေပါကကျွန်ုပ်ထိုတွင်နေထိုင်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုငါနေနိုင်ရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကမ်းခြေတစ်နေရာမှာနေမှာပေါ့၊ Malibu ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးလိုပဲပေါ့။
ပြီးတော့အဲဒါကနည်းပညာရှိမရှိမသိရဘူး၊ Malibu ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ LA လားဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီမှာရောက်နေတာက LA လိုမျိုးမခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့်ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုငါနေနိုင်ရင်ငါလည်းအဲဒီမှာနေမှာပါ။ (beat music musicat music music music music for music for music beauty tip tip skin music music up music music up music music music up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up)))) စင်ကြယ်သောအသားအရေအတွက်အလှအပအစွန်အဖျားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်သောအရာများဖြစ်လိမ့်မည်။
နံပါတ် ၁ ကအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားပြီးပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပါ။ ငါ့ဝက်ခြံအတွက်ဆေးသောက်နေပြီ၊ ဒါကငါ့အသားအရေကိုတကယ်ကျန်းမာစေတယ်။ ထိုအခါငါမပါဘဲယခုငါရှိသည်သောအသားအရေရှိသည်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ငါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ထင်ပေမယ့်အလွန်ဓါတ်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ဖို့။ ငါဟာအစိုဓာတ်ထိန်းပေးတဲ့အဆင့်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ကြင်နာတတ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ကောင်းပြီ၊ အခုတော့ထောပတ်သီး mashed ဖြစ်နေပြီ။ ငါဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ် (ဆားအကြပ်အတည်း) ငရုတ်ကောင်းအနည်းငယ်၊ သံပုရာအနည်းငယ်ထည့်ချင်တယ်။
အဲဒါအများကြီးပဲ အစဉ်မပြတ်ငါသံပုရာနှင့်အတူကအလွန်အကျွံ။ ထိုအခါငါအနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့အနည်းငယ်ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်ထည့်ပါ။
သင်တကယ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါဖြစ်ကောင်းလုံလောက်ပါတယ်ထင်ပါတယ် ဘုရားသခင်ကတကယ်ကောင်းတဲ့အနံ့
ကြက်သွန်ဖြူလိုအနံ့မခံပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်မှာကိုယ်ပိုင်စရိုက်ရှိတယ်။ ငါကအနည်းငယ်ဖွင့်လှစ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ငါ့ကောင်တာဆန့်ကျင်ဒီဆောဖို့ရှိသည်။ (Pop ကောင်တာ) ကြက်သွန်အမှုန့်အနည်းငယ်။
ကြက်သွန်အမှုန့်ကကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေးဖူးတဲ့အရသာကိုတကယ်ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ထို့နောက်ငါအနည်းငယ်ငရုတ်သီးမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်သည်။ ထို့နောက်ငါရောစပ်လိုက်သည်။ Louis Vuitton ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါသံသယမရှိဘဲဆိုလို။ ငါသူတို့နှင့်အတူနွေး, fuzzy ခံစားချက်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့အမြဲတမ်းပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်အသရေ, ခံစားရတယ်။
ကော်ဖီသောက်ချိန်။ ကင်မီးဖိုထဲကထွက်သွားတယ် ဒါနဲ့ထောပတ်သီးကိုထိပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ကျွန်ုပ်ပြောသောကြယ်များကကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ရခဲသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး YouTuber ဖြစ်သော Cody Ko နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
ငါအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက Cody Ko ရဲ့အသံလွှင့်ဌာနမှာရှိနေခဲ့ပြီးသူ့ကိုတွေ့ဖို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူနဲ့သူနဲ့သူနဲ့သူ့ရည်းစား Kelsey တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသူပါ။ ငါသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာ၊
ပြီးတော့သူမကိုသိဖို့အရူးပဲ။ ထိုအခါငါအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ခြင်းသတိရပေမယ့်ယခုငါသူတို့နှင့်အတူမိတျဆှေ။ သူတို့ကအံ့သြစရာကောင်းပြီးအဲဒါတွေအားလုံးထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းရှက်ရွံ့နေတယ်။
ငါတုန်လှုပ်လျက်အလွန်လျင်မြန်စွာစကားပြောခဲ့သည်။ ငါရှုပ်ပွနေတယ် ငါရှုပ်ပွနေတယ် (cheeky music) ငါနောင်တတရားကိုတကယ်မယုံဘူး၊ တစ်သက်လုံးနောင်တမရဘူး။
ဒီလိုရူးနေတာလား။ ဒါပေမယ့်အခုငါကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မယ့်အရာတွေသိသာထင်ရှားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လား? ဒါကြောင့်ငါကနောင်တရဖို့၊ ရိုးသားဖို့တကယ်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါဒီလိုမြင်တယ် အစဉ်အမြဲငါပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာငါ့ကိုနေသောသူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျွန်တော်အဲဒါကိုပြန်ယူချင်ပါတယ် ငါဆိုလိုချင်တာသိလား? (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ကျွန်ုပ်ငယ်ငယ်တုန်းကသိချင်ခဲ့သည့်အရာကဘာမှမထူးဆန်းပါ။ အရာရာတိုင်းဟာဒီလောက်လေးနက်နေပုံရပြီးယခုအချိန်တွင်ဘဝသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားရှိသော်လည်းတစ်နှစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်အောက်လောက်မှာပင်ထိုကဲ့သို့သောဝေးကွာသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပါ။
ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကိစ္စတွေမှာသိပ်မနေပါနဲ့။ ပိုကြီးတဲ့ပုံရှိတယ် ဘဝကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ မကြာသေးခင်ကမှစပြီးငါလုပ်ခဲ့တာကတကယ်အကူအညီဖြစ်စေခဲ့တယ်။ (မထားဘဲဂီတ) ပြီးပြီ။
ငါထောပတ်သီးကင်နှင့်လုပ်ပြီးပါပြီ ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းတကယ်မပြောခဲ့ပါဘူး ငါကသံလွင်ဆီ၊ အရာရာတိုင်းမှာပါ ၀ င်နေတဲ့ရာသီ - ရာသီဥတုနှင့်ဝမ်းရောဂါတို့ဖြင့်ရောထွေးလိုက်ပြီ။ အခုတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
အရမ်းလှတယ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ရွှင်လန်း။ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီမှာ avocado toast နဲ့ကော်ဖီရှိတယ်။
ဒါငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ် ငါသွားမယ်၊ ငါအရမ်းဂုဏ်ယူလို့ avocado toast ရဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ကူးရမယ်။ (မမျှော်လင့်ဘဲတေးဂီတ) Mm၊ ငါနောက်ဆုံးပြခဲ့တဲ့ HBO Max မှာ 'The Vow' ပဲ။ ပြီးတော့အဲဒါကတစ်ဆူတည်း။
အနည်းငယ်ကြောက်စရာပါပဲ ဒါပေမယ့်ငါကကြိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကလူ့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ဒီပြသမှုကဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုတွေနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ပညာထဲကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်နေခြင်းပဲ
ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်း The Office 'နဲ့အမြဲအလုပ်များနေတယ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသူမှာငါ့သူငယ်ချင်း Olivia ဖြစ်သည်။ (ရွှင်လန်းသောဂီတ) ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပြောင်မှာ (bubble pops) pouting emoji ဖြစ်သည်။
ငါ့အဲ့တာကိုသဘောကျတယ်။ ငါဒါမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ငါလည်းအနီရောင်နှလုံးကိုကြိုက်တယ်
အရမ်းမြန်ပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် ငါဆိုလိုချင်တာသိလား? အားလုံးညာဘက်ရှေးရှေး, နားထောင်ပါ။ ငါ့ကိုချက်ပြုတ်ကြည့်ပြီးငါနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာငါ့ကိုသိပါစေ။ ဒါကိုစားမလား ငါဆိုလိုတာကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်တယ် ငါအပန်းဖြေပါတယ်
ဒါပေမဲ့မင်းကဒီအစာကိုစားပြီးသောက်မလားသိလား။ ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများအတွက် ၁၇ ဆ YouTube ၏ရုပ်သံလိုင်းကိုရယူပါ။ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ယူကျုချန်နယ်လိုင်းကိုသွားလိုပါကကျွန်ုပ်၏အမည်မှာမင်းသမီး Emma Chamberlain ဖြစ်သည်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖွင့်လှစ်ချင်လျှင်ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်မင်းသမီး Emma Chamberlain ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျငါနှင့်ကော်ဖီအတူတူလိုချင်ပါက ChamberlainCoffee.com ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကော်ဖီကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်သည်။
ငါနှင့်အတူဆွဲထုတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းစမ်းကြည့်ကြည့်စမ်းပါ ဦး ။ (အစားအစာ crunches) နုတ်ဆက်ပါတယ်! (Cheeky ဂီတ)
ရန်လုပ်ကတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများကိုချက်ချင်းရောမွှေပါကော်ဖီ, granulated သကြားနှင့်ရေ။ အဆိုပါအရောအနှော liquidy ကနေစူပါအထူသွားပါလိမ့်မယ်အချစ်။ ထို့နောက်အရောအနှောကိုရေခဲသေတ္တာထဲ၌ဖြစ်စေ၊ ပူဖြစ်စေသော်လည်းကောင်းရွေးချယ်ထားသောနို့ကိုထည့်ပါ။ ထိုအက - လွယ်ကူသောရိုးရှင်းသောအချစ်frothy နှင်တံကော်ဖီ!မတ် ၂၇ 2020
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရေအစားနို့နှင့်ကော်ဖီစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ထုတ်လုပ်သည်တစ်အများကြီးလျော့နည်းခိုင်မာတဲ့ခွက်ကိုကော်ဖီနှင့်လုပ်နိုင်ထိုကဲ့သို့သော curdling အဖြစ်ပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်နို့နှင့်သင်၏ပိတ်ဆို့ခြင်းကော်ဖီထုတ်လုပ်သူ။မင်းဆိုရင်ချင်တယ်လုပ်တယ်ဒီကတဖြည်းဖြည်းပူနွေးဖို့အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်နို့နှင့်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းကိုအသုံးပြုပါ။
နောက်ထပ်ဘာသာပြန်ချက် 'နို့နှင့်အတူကော်ဖီပျှမ်းမျှအမေရိကန်အပေါ်နို့နှင့်အတူ ''ကော်ဖီ-shop menu သည် brewed ကိုဆိုလိုသည်ကော်ဖီအတူပါနို့နှင့်အတူ espresso ဆန့်ကျင်သည်နို့(အထက်တွင်ကြည့်ပါ။ Café Latte) ။သြဂုတ် ၉ 2018
လုံးဝရှိလျှင်မဟုတ်ဘူးCrema, ဒီဟောင်းနွမ်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်ကော်ဖီ။ နောက်တဖန်, သင်သေချာအောင်စစ်ဆေးပါကော်ဖီ၎င်း၏ကင် နေ့မှစ၍ သုံးပတ်အတွင်းဖြစ်သည်။ သင်၏သိုလှောင်ပုံကိုဆန်းစစ်ပါကော်ဖီ။ အေးဆေးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာရှိနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာသတိရပါ။မဟုတ်ဘူးအလွန်အကျွံအပူ၌သို့မဟုတ်အတွက်ကရေခဲသေတ္တာ။ဇွန် ၂၀ ၂၀၁၄
နို့ရေထဲမှာမရှိသောပရိုတိန်းပါရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပူဖြင့်ဆိုလိုသည်နို့အတွင်းပိုင်းအထိကစက်ကိုသင်ဘက်တီးရီးယားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ မသာပေမယ့်နို့အရသာမကောင်းဘူးဘယ်တော့လဲအရမ်းအပူတက်နေတယ်အကယ်၍မင်းထဲမှာနို့ထား၏စက်ထို့နောက်ကြောင့်ဖွယ်ရှိဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်ကော်ဖီအလွန်ဆိုးရွားအရသာ။
နို့မကြာခဏအရသာဖန်တီးခြင်းတစ်ခုသတိမမူရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီconcoction ။ သို့သော် lattes, cappuccinos နှင့်အခြားတစ် ဦး အကွာအဝေးအဘို့နို့ထွက်ပစ္စည်း-infusedကော်ဖီအဖျော်ယမကာ,နို့ထက်ဝက်ကျော်ကိုတက်စေသည်သောက်ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များထက်မကစဉ်းစားစရာများစွာရှိသည်နို့အတိတ်ပါပဲအသုံးပြုသည်- နေ့စွဲဖြင့်။သြဂုတ် ၄ 2017
ကံကောင်းတာက, ကလွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်ကိုဖွင့်, ကော်ဖီဆိုင်များ, သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်စီးပွားဖြစ်တန်းသန့်ရှင်းရေးကိုအသုံးပြုနေစဉ်, သင်ရေနှင့်ရှလကာရည်ထက်အခြားဘာမှမလိုအပ်ပါ။ တန်းတူညီမျှသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအဖြူရောင်ရှလကာရည်နှင့်ရေကိုသင်၏ကော်ဖီစက်ထဲသို့လောင်းကာမင်းပုံမှန်လုပ်လိုသည့်အတိုင်းချက်ပြုတ်ပါ။
သင်မည်မျှကျက်စားရန်လိုသည်ကိုကြည့်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုဖတ်ပါ။ သင်၏ကော်ဖီစိုက်ရန်ရေအလုံအလောက်ထုတ်ပါ။ တိုင်းတာရန်အတွက်သင်တိုင်းတာသည့်လိုင်းများကိုကော်ဖီအိုးတွင် (သို့) ကော်ဖီပြုလုပ်သူများ၏ဘေးထွက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကော်ဖီသောက်သူမှရေကိုသွန်းလောင်းရန်ကော်ဖီအိုးကိုသုံးပါ။ များသောအားဖြင့် filter ၏နောက်တွင်သို့မဟုတ်အထက်နေရာလွတ်ရှိသည်။
၎င်းတို့အများစုသည်အအေးခံထားသောကော်ဖီထုတ်လုပ်ရန် ၂၄ နာရီအထိကြာမြင့်စွာမတ်စောက်သောအချိန်လိုအပ်သည်။ ကော်ဖီနည်းသော၊ ရေပိုသုံးသောအခါအအေးကော်ဖီဘီယာများသောက်သုံးရန်အသင့်ဖြစ်သည့်ကော်ဖီကိုအအေး (သို့) အပူဖြင့်ဖြစ်စေထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကရေပူထဲသို့ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရေခဲဖြင့်လောင်းနိုင်သည်။